Dhalinyaro u dhalatay dalka Hindiya oo lagu ciqaabay heesta Kiki – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDhalinyaro u dhalatay dalka Hindiya oo lagu ciqaabay heesta Kiki
Hiiraan Xog, Waxaa aad baraha bulshada adduunka ugu faafay heesta Kiki ee uu qaado fanaanka reer Canada ee Drake, taas oo ay dadka ku dayanayaan qaabka, iyaga oo samaynaya qoob-ka-cayaar lagu matalayo ereyada heesta ku jira.
Balse wixii maanta ka horeeyay waxa ay iska ahayd wax iska caadi ah, hase yeeshee saddex nin oo dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Hindiya ayaa lagu ciqaabay in muddo 3 maalmood ah ay nadiifiyaan xarun tareen oo dalkaas ku taala kadib markii ay muuqaal iska duubeen iyaga oo heesta ciyaaraha xilli ay tareen saarnaayeen.
Booliiska ayaa raggan soo xiray, kadibna maxkamad geeyay, iyada oo xaakimkii uu riday xukunka ciqaabta ah.
Muuqaalka ayaa waxa ay ku muujinayeen sida dadka gobolada kala duwan ee Hindiya ay heesta u ciyaari lahaayeen.
Muuqaalada ay dadka soo dhigeen baraha bulshada ayaa waxa qaarkood ka mid ah kuwa dad ay ka degayaan baabuur socda, oo inta albaabka furaan heesta la ciyaarayaan, taasna waxa ay keentay in mas’uuliyiinta dowladda ay digniino kasoo saaraan halista ku jirta.
Muuqaalka ay wiilashan duubeen oo Youtube la galiyay ayaa waxaa daawatay wax ka badan 2 milyan oo qof.
Mid ka mid ah dhalinyarada ayaa tareenka oo taagan ka dagaya, kadibna marka uu tareenka dhaqaaqo ayuu barbar ordayaa isaga oo heesta la ciyaaraya, saaxiibadiisna ay duubayaan. Waxa kale oo uu muuqaalka muujinayaa saaxiibadiis oo ka raaraca albaabka tareenka.
Xaakimkii dacwada dhagaystay ayaa u sheegey eedeysanayaasha in ay wax xun sameeyeen, ayna tahay in ay sameeyaan wax ay bulshada ku wacyigalinayaan.